Vaovao - Torolàlana fohy ho an'ny lamba antistatika
Nandritra ny taona maro dia nanontaniana aho raha anti-static, conductive, na dissipative ny lambanay. Ity dia mety ho fanontaniana sarotra mitaky làlana kely amin'ny teknika elektrika. Ho antsika izay tsy manana fotoana fanampiny nanoratantsika ity lahatsoratra bilaogy ity dia fiezahana hamoaka ny sasany amin'ny mistery amin'ny herinaratra mijanona sy ny fomba hifehezana azy amin'ny lamba.
Raha te hahalala ny fahasamihafana misy eo amin'ny antistatika, dissipative ary conductive satria mifandraika amin'ny herinaratra sy ny lamba dia mila fantatrao aloha ny fahasamihafana misy eo amin'ny teny insulate sy conductive satria mifandraika amin'ny herinaratra, ka andao isika hanomboka amin'ny famaritana sasany
Ireo mpanentana dia zavatra na karazana fitaovana mamela ny fikorianan'ny vidin'ny herinaratra amin'ny lalana iray na maromaro. Ny metaly dia mitarika ary izany no antony hampiasana herinaratra manerana ny tranonao amin'ny endrika tariby elektrika, ohatra. Ny insulator dia mifanohitra amin'ny conducteur fotsiny satria izy ireo dia fitaovana izay tsy mandeha maimaimpoana ny vidin'ny herinaratra ary noho izany dia mametra ny fikorianan'ny herinaratra.
Raha hiverenana amin'ny ohatra tariby elektrika isika, raha mandeha tsara amin'ny alàlan'ny vy ny herinaratra dia tsy mandeha tsara amin'ny alàlan'ny PVC sy ny taratasy ampiasaina hamatsiana tariby elektrika. Ireo insulator amin'ny tadiny fanitarana, PVC ary taratasy, dia manakana ny fiampangana tsy handalo azy ireo mamela anao hisambotra ny tadiny nefa tsy taitra ianao.
Amin'ny ankapobeny ny PVC dia manao insulator tsara, saingy misy zavatra azo atao mba hahatonga ny lamba maotera PVC hivezivezy kokoa. Ny haavon'ny fanodinkodinana ny fitaovana hanovana ny toetrany mitondra dia hametraka azy ho iray amin'ireo sokajy telo; antistatic, static dissipative, na conductive.
Araka ny MIL-HDBK-773A DOD Handbook dia ireto misy famaritana ireto ho an'ireo sokajy telo ireo:
Antistatic - Enti-milaza ny fananan'ny fitaovana iray manakana ny vokatry ny famonoana triboelectic. Ny triboelectric charge dia herinaratra mijanona amin'ny ankapobeny.
Static Dissipative - Fitaovana izay hanaparitaka haingana ny fiampangana elektrostatika amin'ny ambonin'ny na ny habeny, manana elanelam-pifanohitra eo anelanelan'ny conductive sy insulative.
Conductive - Fitaovana nofaritana ho toy ny ambony na ny fitarihana ny volume. Ny fitaovana toy izany dia mety ho metaly na misy metaly, sombin-karbaona, na akora fitondra mitondra hafa na izay nohajaina tamin'ny fitaovana toy izany tamin'ny alàlan'ny dingan'ny famonoana, fametahana, fametahana metaly, na fanontana.
Mba hamaritana raha mahafeno ny iray amin'ireo sokajy telo ireo ny fitaovana dia misy ny fitsapana azo atao mba handrefesana ny fanoherana ny tany izay refesina amin'ny ohm / square. Ity ambany ity ny kisary iray izay mamolavola ny fanasokajiana mifototra amin'ny haavon'ny fanoherana an-tampon'ny.
Rehefa mamolavola ny vahaolana momba ny vokatra ianao dia mila mamaritra hoe iza ny haavon'ny fitantanana tadiavin'ny fampiharana. Zava-dehibe ny fahafantaranao ny fitakian'ny fampiharana manokana ary rehefa mifampiraharaha amin'ireo injeniera na mpamolavola ianao dia mety ho tsara kokoa ny mangataka ny haavon'ny Ohms takian'izy ireo.